Okpuru kukumba: mgbochi, ihe mgbaàmà, ihe kpatara ọrịa na ọgwụgwọ ha - Akwukwo nri - 2019
Onye ọ bụla na-eri nri ihe oriri na-eche ọrịa na pests nke akwukwo nri n'ubi. Ọ bụ otu ihe mgbe ọ na-eme n'ihi nlekọta na-adịghị mma, na ihe ọzọ mgbe osisi ahụ na-arịa ọrịa n'ihi enweghị ihe kpatara ya. Isiokwu a ga-atụle otu esi echekwa cucumbers si ọrịa na pests.
Ọtụtụ mgbe, ọrịa ọrịa kukumba na-akpata nlekọta na-ekwesịghị ekwesị. Mgbe ụfọdụ, a na-ebute nje ahụ site na ngwaọrụ maọbụ site na ala.
Ọrịa nke na-emetụta ahụ dum nke osisi (akwụkwọ, ahịhịa, okooko osisi na mkpụrụ osisi). A pụrụ idebe ọrịa na ala, ihe nkwụsị nke ụlọ. Ọzọkwa, a na-ebute ya site na ikuku, ya mere enwere oke nkesa.
Ị ma? Otu n'ime nsogbu nke ero ahụ, nke na-akpata ntụ ntụ ntụ, na-eji mmanya na-aṅụ mmanya iji nweta ihe ndị dị na ya na ọdịnaya shuga dị elu.
Ntughari na cucumbers na-emekarị n'ihi oke iru mmiri na obere okpomọkụ. N'oge ndị dị otú ahụ, osisi ahụ adịghị ike, ọtụtụ ọrịa nwere ike ibuso ya agha n'otu oge.
Mgbaàmà nke ntụ ntụ ntụ:
ọdịdị nke ntụ ntụ na ncha, akwụkwọ na mkpụrụ osisi;
mkpịsị uhie na mkpụrụ osisi (mgbe nke ahụ gasịrị, kukumba na-amalite ire ere na nkụ);
oke ahihia nke akwukwo osisi nile;
Ọrịa ahụ dị ize ndụ n'ihi na nnukwu mmeri ọ ga-ebibi ọ bụghị naanị otu ohia, kamakwa omenala niile a kụrụ n'akụkụ ya. N'otu oge ahụ, afọ na-esote, ire ere nwere ike ịlaghachi na akwukwo nri ma ọ bụ mkpụrụ osisi, dịka ọ ga-anọgide na ala.
Ngwurugwu a na-emetụtakarị akụkụ nke osisi nke na-abata na ala. Ọ bụrụ na ị kụrụ strawberries na dacha gị, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ otú mkpụrụ osisi na-esi kpuchie ya na-acha akwụkwọ ndụ, mgbe ahụ, ọ ga-ere. Otu ihe ahụ na-eme na cucumber, n'ihi ya, ịkwesịrị iji ọgwụgwọ na oge ịzọpụta ihe ọkụkụ ahụ.
A pụrụ ịgwọ ọrịa ahụ site n'enyemaka nke fungicides (Fitosporin-M). Tupu ị na-eji ọgwụ ndị dị mkpa ka ị bepụsịa epupụta ọrịa na Ome. Nakwa uru na-agbalị na omenala ụzọ: 300 g osisi ash, nzu na 1 tsp. ọla kọpa sulfate na 10 lita mmiri. Nke a ego ezuru abụọ kukumba bushes.
Gosiri na ndị na-ahụ maka mmiri ọgwụ, nke gụnyere ọgwụ Trichodermin. Ihe na-arụsi ọrụ ike bụ ero nke na-ebibi ire ere ntụ ntụ, ebe ọ naghị eburu osisi na nwoke egwu ọ bụla.
Ọ dị mkpa! Ihe nile emetụta Ome na epupụta na-eji ebe obibi iji gbochie nlọghachi ọrịa.
Usoro Mgbochi Mgbochi Grey:
nhọrọ nke iche iche na-eguzogide ọrịa ahụ;
iwepu ihe mkpofu osisi sitere n'ubi;
White rere na cucumbers na-apụta ugboro ugboro, dịka ọ na-ebi n'ime ala ma na-ebugharị ifufe site n'ebe dị anya. Onye na-eme ka ndị na-emepụta ihe bụ ero microscopic nke na-emepụta osisi ahụ n'oge ọjọọ.
Ọ bụrụ na ihe oriri ahụ na-emetụta ọkpụkpụ ọcha, mgbe ahụ, cobweb-like growths na-apụta na ya. Site na ọrịa a na-amalite ịmịpu n'elu mkpuru osisi ahụ, epupụta na-agwụ, gbanwee na-acha ọcha ma bụrụ onye umengwụ.
Ihe kpatara ọrịa enwekwu iru mmiri na mgbanwe mberede na ọnọdụ okpomọkụ (ọnọdụ kachasị mma maka nchara - nchara, nke si na njedebe dị njọ na okpomọkụ).
Ọrịa a ọ bụghị nanị na-egbochi uto nke cucumbers, kamakwa ọ na-eme ka ọ na-eji ike ya niile na-alụso nje ahụ ọgụ. A gaghị enwe owuwe ihe ubi: mkpụrụ osisi ahụ ga-amalite nkụ, ha ga-erekwa.
Ka ị ghara ịhapụ ero ahụ na cucumbers, ị chọrọ mee mgbochinke bụ dị ka ndị a:
nhicha ala site na osisi rere ure;
nri dị mgbagwoju anya (zinc sulphate, urea, blue vitriol);
belata nhicha nke ikuku (ma ọ bụrụ na esite na griin ha).
Ọ bụrụ na ire ere ọcha achaalarị kukumba bushes, mgbe ahụ, ọ nwere ike wepụ ma site na ụzọ ndị mmadụ na preparations pụrụ iche.
Na nmalite, a na-ebipụ Ome ndị nwere ọrịa, ebe a na-ebechasị ya na carbon. Ọzọkwa, a ga-edozi mpekere na ngwakọta ndị a: ground chalk na potassium permanganate (na obere mmiri).
A pụrụ iji ụzọ dị otú ahụ mee ihe na nhazi mbụ, ma ọ bụ mgbe a na-emetụta bushes 2-3. Ọ bụrụ na ọtụtụ bushes na-arịa ọrịa, ọ ka mma iji fungicides. Ndị kasị ewu ewu na ọnụ ọnụ bụ Oxyhom, Topaz, Rovral SP ma ọ bụ ọla kọpa sulfate dabeere na ọgwụ ọjọọ.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ndị fungicides adaala, a kpochapụrụ osisi kpamkpam ma kpọọ ya ọkụ.
Iji chebe ihe ubi ndị ọzọ ị kụrụ n'afọ ọzọ, ọ dị gị mkpa iburu ala na antiseptic ma ọ bụ ọgwụ na-egbuke egbuke.
Ọdịiche dịgasị iche, nke na-emetụta akụkụ nke ala nke osisi ahụ. Ọrịa a bụ ihe a na-ahụkarị na ọ bụghị nanị ndị na-elekọta ubi na-eche ihu ya, kamakwa ọtụtụ ndị na-elekọta ubi. Nkpọrọgwụ ire (ma ọ bụ nwa ụkwụ) eme ka ero na-ebi n'ime ala.
Usoro mgbọrọgwụ a gbanwere na-eme ka oji, rots ma nwụọ kpamkpam. N'adịghị ka Ome ndị na-arịa ọrịa, ọ na-esi ike ịhụ mgbọrọgwụ ọrịa, ya mere, na-eduzi ya ihe ịrịba ama ndị ọzọ nke ọrịa ahụ:
osisi na-agwụ ike ọbụna mgbe ịgbara mmiri;
epupụta na-amalite na nkụ, na njigide na-apụta n'elu ha;
okooko osisi na-ada tupu mmiri ovaries apụta;
ihe mgbọrọgwụ nke ahịhịa ahụ na-agbagharị edo edo;
akwụkwọ gbanwere agba ma kpuchie ya na ọchịchịrị;
Ọganihu nke ohia anaghị egbusi.
Mmepe nke ire ere na-eduga Ọ bụghị nanị na ịṅụbiga mmanya ókè nke ala na nlekọta na-adịghị mma, kamakwa ihe ndị na-esonụ:
mmiri mmiri mmiri;
mkpụrụ na-akụkwa nke ọma;
Ọtụtụ mgbe, ebe dị mma maka ero ahụ bụ ala mmiri. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-agbaso iwu nke ịgbara mmiri, ala ọjọọ, nke dị arọ nwere ike ibute ọrịa. Gbalịa ịgbaso ala, àgwà ya na mmiri drainage.
Ọ dị mkpa! Mgbọrọgwụ ire ere na-anọgide n'ime ala ọbụna mgbe ọ wepụsịrị osisi ahụ nwere ọrịa. Ya mere, ala a ga-etichapụ, ma kwụchaa maka otu afọ n'okpuru uzuoku.
Ọtụtụ ndị na-elekọta gardeners nwere mmasị na ihe ha ga-eme cucumbers iji kpochapụ ire ere. Iji merie ire mgbọrọgwụ, ọ dị gị mkpa iji fungicides.
Na mmalite oge, ị nwere ike ịnwale ụzọ ndị mmadụ: tinye 1 tsp ka 0,5 l mmiri. mmanụ aṅụ, obere osisi ash na 3 tbsp. l ọkpụkpụ a na-agbaji. Na onyinye a, na-emetụ akụkụ ndị metụtara ebe ahụ.
Dị ka iji ụzọ ndị mmadụ, na ndị na-egbu egbu, ọ dị mkpa ka ị wepụ ụwa site na mpaghara ndị emetụtala mgbọrọgwụ (ma ọ bụrụ na, n'ezie, nke a abụghị akụkụ buru ibu nke usoro mgbọrọgwụ).
O kwesịkwara icheta na ire ere na-akpata ọtụtụ ụdị nsị. Dịka mkpa a dị iji bulie ọchị. Chọpụta ụdị ụdị nro nwere ike ịbanye na laabu.
Ọ bụrụ na ị nwara ụzọ niile, kukumba na-akpọnwụkwa, mgbe ahụ, ọ na-anọgide na-egwupụta osisi ahụ na mgbọrọgwụ ma wepụ ya na saịtị ahụ.
Na iji gbochie nloghachi nke mgbọrọgwụ na-akụ na ubi, na-emefu ihe nchedo:
gbanye osisi ahụ kpamkpam n'okpuru mgbọrọgwụ, ghara ịdaba na akwukwo na azu;
nyefee weeding na oké okpomọkụ;
gbanye osisi ahụ na mmiri ọkụ;
họrọ nri ndị dị n'ihu (mkpo, poteto, eyịm ma ọ bụ tomato).
Mealy igirigi - ọ bụ ọrịa na-akpata ọrịa nke microscopic ectoparasitic fungi kpatara. A na-ahụ blank mycelium na anya gba ọtọ na epupụta osisi: a na-ese ha na agba ọcha, dịka ncha.
Na mgbakwunye na epupụta ahụ, ero ahụ na-emetụta mkpuru osisi ahụ, Ome na mkpụrụ osisi. Mgbe mycelium na-etolite, ntakịrị mmiri mmiri na-etolite n'ime ya, nke mere ọrịa a ji bụrụ aha ya. Ịgba chaa chaa na oge na-abawanye ụba wee malite ịchịchịrị.
Ọrịa a dị ize ndụ ọ bụghị naanị n'ihi na ọ na-eme ka bushes "agba ntụ", ọ na-eme ka oge na-eto eto, na-egbochi usoro dị mkpa n'ime osisi ahụ. Na-emetụta epupụta Ome blacken ma nwụọ oge.
Otu ihe ahụ na-eme na mkpụrụ osisi na-akwụsị na-eto eto na akpọnwụ. Ọ bụrụ na ọkụ powderwhat kụrụ cucumbers na oge okooko, mgbe ahụ ovaries agaghị, na ị ga-ekpe na-enweghị ihe ubi. A pụrụ ịhụ mildew powdery na cucumbers na foto dị n'okpuru ebe a.
Dị ka ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ, powdery mildew nwere mmetụ dị elu ma na-agbanwe okpomọkụ. Mmetụta nke ọrịa ahụ dara na mmalite oge ọkọchị, mgbe enwere mgbanwe n'etiti mmiri mmiri na okpomọkụ.
Ọzọkwa, ero nwere ike ịpụta n'ihi oké nitrogen njikọta ụlọnga. Ọ bụrụ na cucumbers na-eto eto na griin haus, ndị na-akpata ọrịa bụ a gbara ma ọ bụ ọkụ ọkụ.
Ọ dị mkpa! A na-ebufe mmiri ma ọ bụ obere tụlee mmiri nke powdery mildew pathogen.
Na-emeso cucumbers maka powdery mildew Ị nwere ike iji ọtụtụ ụzọ:
ndị na-egbu egbu;
ụzọ ndị mmadụ;
Ụzọ ndị mmadụ nwere ike isi nyere aka na ọnọdụ ọ bụla, ma ọ bụghị otu. Were 4 grams soda ash na 4 grams ncha kwa 1 liter mmiri. Ihe ngwọta a ga-atụgharị akụkụ nke osisi otu ugboro n'izu.
Ụzọ ọzọ na-agụnye iji mmiri mmiri ara ehi. Kewapụ ọbara ahụ ma gbasaa n'ime mmiri 1 ruo 10. Ịgba kukumba bushes si egbe egbe.
Ọ bụrụ na usoro ọdịnala adabaghị, mgbe ahụ ị nwere ike ichighari na onwu. N'ime ndị na-egbu egbu nke na-arụ ọrụ dị oke mma na eriri powdery, anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị na Fundazol, Topaz, Topsin na Bayleton.
Ọ dị mkpa! A na-ahụ ihe ọkụkụ na-egbu egbu, nke na-eguzogide ọgwụ ụfọdụ. Ya mere, na enweghị mgbanwe maka mma - gbalịa ọzọ fungicide.
Enwekwara ihe na-emetụ n'obi, ma ọ bụghị ụzọ dị irè iji merie igirigi. Biofungicides - nkwadebe nke nwere microorganisms nke na-eri nri na mmanu powdery mildew.
Ndị na-ahụkarị biofungicides bụ Fitosporin-M na Planriz. Ndị ọgwụ ndị a dị ala karịa ike iji na-egbu egbu, ma ha adịghị emerụ ụmụ mmadụ na osisi ọkụ. Ọ dị mkpa itinye ha n'ọrụ ugboro ugboro.
Iji gbochie ọrịa, dị mkpa iji mepụta mgbochi na-esonụ:
nhichapu ihe ndi ozo nke osisi si n'ubi akwukwo nri (ihe ndi ozo n'ime ha);
iwebata phosphate na potash nri;
atọ cucumbers n'ụzọ doro anya n'okpuru mgbọrọgwụ.
Ị ma? Ala nna nke kukumba bụ mpaghara ebe okpomọkụ nke India na nso ugwu ugwu Himalaya. Osisi ejiwo ihe kariri puku puku isii.
Egwú ma ọ bụ perinospora, cucumbers na-arịa ọrịa ọtụtụ mgbe. Nke a bụ ọrịa nke ọtụtụ nsị dị ala kpatara.
Peronosporosis na-egosipụta onwe ya na yellowing nke epupụta, Ome, mkpụrụ osisi na ha n'ihu rotting. Ebe osisi na-arịa ọrịa na-ekpuchi epupụta ahụ, oghere ndị na-acha odo odo na-apụta na ha. Ka oge na-aga, ntụpọ na-acha aja aja, akwụkwọ ndị ahụ na-agwụsịkwa. Akụkụ nke osisi nwere ọrịa nwere ike ibute ahụ ike, ebe ọ bụ na ha nwere spores nke ero.
Perinosporosis dị ize ndụ n'ihi na, dị ka ájá ájá, na mbụ, ọ na-eme ka ọganihu nke ohia na mkpụrụ osisi ahụ dị ntakịrị, ma na-eduga n'ozuzu dum nke osisi ahụ dum. Ya mere, ịlụ ọgụ megide ọrịa a bụ cucumber, ebe ọ bụ na e nwere ihe ize ndụ nke ibute ọrịa ọ bụghị nanị nke nkwekọrịta gị dum, kamakwa nke ubi ndị agbata obi.
Ọ dị mkpa! Peronosporosis na-emetụta ụdị osisi niile a kụrụ n'ubi, gụnyere osisi ornamental na ọbụna okooko osisi. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa iji ọgwụgwọ mee ihe n'oge.
Mmiri ala na-apụta mgbe mgbe na njedebe oge opupu ihe ubi, mgbe ihu igwe dị oke mmiri ma mmiri ozuzo na-ezo. Ọ bụ mmụba na-arịwanye elu na mbenata nke igbochi nke osisi nke na-eduga na ọrịa site na ero.
A na-ebute mkpụrụ ndụ nje pathogenic site na nje ụmụ ahụhụ (aphid, whitefly na ndị ọzọ), ya mere, ebe ọrịa na-egbu egbu dị nnọọ ukwuu. Ọzọkwa, ọrịa ahụ na saịtị ahụ nwere ike ibute ya na ihe akuku. Mkpụrụ osisi na-adịghị ọcha bụ otu n'ime isi ihe kpatara ọrịa.
Ozugbo ịchọtara obere ihe mgbaàmà nke downy mildew na cucumbers gị, ị ga-enyocha ozugbo bushes niile, ma, ọ bụrụ na nyocha ahụ kwadoro, na-ewere ọgwụgwọ. Ngwọrọgwu ndi mmadu atụ aro ọtụtụ ụzọ isi merie ero ahụ:
Mix 10 tụlee nke 5% ayodiin, 1 liter nke skim (ma ọ bụ 1%) mmiri ara ehi na 9 l mmiri. Ihe ngwọta nke a na-esi na ya pụta bụ nke dị n'elu osisi.
Brew 2 iko nke ash ash na lita atọ nke esi mmiri. N'uzo site na otutu uzo nke gauze. Ihe ndị infusion tinye 10 lita mmiri. Mee kwa nhazi nke ohia a, na-agbali ime ka ala nke ala di ala.
Na 10 lita mmiri, igbari 1.5 g nke potassium permanganate ma fesa cucumbers.
Na mgbakwunye na usoro ndị mmadụ, a na-eji kemistị eme ihe. Ọ bụrụ na ero ahụ agbasawo n'ọtụtụ buru ibu, mgbe ahụ, fungicide Fitosporin-M ga-enyere gị aka. Ọzọkwa, a pụrụ ịmepụta ihe oriri ahụ na ngwangwa 0.4% nke ọla kọpa oxychloride ma ọ bụ 1% Bordeaux mmiri mmiri.
Iji gbochie ọrịa ndị na-abịa n'ihu n'ọdịnihu nke akwụkwọ nri gị na mkpụrụ osisi, ịkwesịrị ịmepụta ihe mgbochi ọrịa.
Cucumbers 14 ụbọchị mgbe akuku kwesịrị mesoo ya na 1% ngwọta nke Bordeaux ngwakọta. A na-eme nhazi n'agbanyeghị ụdị dịgasị iche iche na usoro nke kụrụ.
Nakwa, ọrịa ahụ na-egbochi enweghị ọgwụ ndị ọzọ dị na mpaghara ahụ, ihe oriri na-edozi ahụ na ala mulching.
Ọ bụrụ na kukumba gị na-etolite na griin haus, wee debe iru mmiri n'okpuru 80% na okpomọkụ dị n'okpuru 20 Celsius iji zere ero ọrịa. Echefula na ị na-eri nri cucumbers, ebe ọ bụ na nnukwu nsogbu bụ ihe ọzọ na-egbochi mmeri site na mmiri ọkụ.
Ị ma? Kukumba nwere potassium, nke mejupụtara imeju na akụrụ ọrụ. Ọzọkwa, kukumba jupụtara n'ụba. Enweghị anụ ahụ na-adịghị etinye ya n'ahụ, ma ọ na-achịkwa ọrụ nke eriri afọ ya ma na-ewepu cholesterol karịrị n'ahụ ahụ.
Anthracnose - ọrịa fungal nke cucumbers, nke sitere na deuteromycetes (ezughị oke). Ọrịa ahụ na-emetụta ọtụtụ mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi.
Na osisi ahụ, anthracnose na-egosi dị ka ogho na-acha uhie uhie na-ejikwasị mgbidi na ala. Ka oge na-aga, ihe ndị ahụ tụrụ, akwụkwọ mpempe akwụkwọ ahụ nwụkwara. Akpịrị ịda mbà n'obi na-apụta n'elu osisi na Ome, na-egbusi ma na-egbochi mmegharị nke nri.
Ọzọ, ohia na-amalite ịkụ, na-agbaji. Ya mere, ọ bụrụ na oge adịghị anabata ọgwụgwọ, mgbe ahụ, ịnwere ike ịhapụ osisi niile a kụrụ.
Ọrịa ahụ na-egosi na mbido May, na-emetụta akụkụ ndị na-asọ oyi nke osisi - obere ala na mpaghara ala nke kukumba.
Ọ dị mkpa! E kwesịghị iri mkpụrụ ndị nwere nsogbu!
Isi ihe kpatara anthracnosis gụnyere:
akwa iru mmiri;
phosphorus na potassium agụụ;
mụbara acidity nke ala.
Ọrịa ọrịa na-achịkwa ekwu na ọgwụ ọjọọ.
Na-emeso kukumba bushes na 1% colloidal sọlfọ nkwusioru.
Dị ka ntụziaka ahụ si dị, gbanye cucumbers na ngwọta 1% nke Bordeaux ngwakọta.
Na-ekpuchi akụkụ ndị ahụ emetụtara na ngwọta sulfate nke dị 0.5%.
Ndị ọzọ na-egbu egbu ndị na-ebibi ero: Oxy, Acrobat MC, Sandofan M8.
Iji malitegodị, mee ihe oriri na-edozi ahụ iji gbasaa nsogbu ya. Gbalịa ịchịkwa usoro ịgbara mmiri na oge iji merie pests ndị nwere ike ibute ọrịa.
Omume na-eme ka ndị na-adịghị ike na-eme ihe iji chebe osisi. Ọ bụrụ na ị na-atụ ụjọ na mmiri ọgwụ ga-adaba n'ime mkpụrụ ahụ, ị ​​nwere ike iji ọgwụ ndị dị ala karị.
Aha nke abuo bu oria a akụkụ ntụpọ mkpụrụ akụkụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ọrịa ndị gara aga kpatara site na microgika, ma ọrịa na-akpata nje bacteria (Erwinia), nke na-eme ka cucumber dịkwuo.
A na-egosi bacteria na ihu igwe ọkụ na oke iru mmiri (okpomọkụ + 25-27 ˚С na iru mmiri 80-85%). Nje bacteria nwere ike iji osisi, ala, ma ọ bụ mkpụrụ osisi ghaa n'ala. Ọrịa ahụ maka oke dị anya na-ebufe ifufe na ụmụ ahụhụ.
Ọ dị mkpa! Ọrịa ahụ na-emetụta cucumbers ma n'ọhịa ma na griin haus.
Ọrịa ahụ bụ isi dị ize ndụ n'ihi na ọ nwere ike ịkụ osisi ahụ n'oge ọ bụla: site na ịgha mkpụrụ seedlings ruo mgbe oge mkpụrụ ahụ gachara.
Bacteriosis na-emetụta epupụta, Ome, mkpụrụ osisi. Ọ bụrụ na osisi ahụ na-arịa ọrịa n'oge oge okooko, mgbe ahụ, ovary ahụ agaghị. Nke kacha nta mkpụrụ ọnwụ bụ 30%. Ọ bụrụ na ị naghị emeso ọrịa a, ị ga-ahapụ gị n'enweghị owuwe ihe ubi.
Akwukwo Akwukwo Nso gosipụtara dị ka ndị a:
odo tụrụ bụghị cotyledon epupụta;
agba aja aja na-acha aja aja n'èzí nke mpempe akwụkwọ ahụ;
ịmepụta mmiri mmiri dị na azụ na mpempe akwụkwọ ahụ;
mmiri ọnya na-egbu mmiri na azuokokoosisi, Ome, mkpụrụ osisi;
deformation nke mkpụrụ.
Na-emeso ọrịa nje Ị nwere ike ọtụtụ ụzọ.
Mbibi nke osisi rere ure;
na-akụkọta ya na ntụgharị zuru oke nke ala oyi;
eji ogwu na-eguzogide ọrịa (Cascade, Graceful, Kustovoy na ndị ọzọ).
Ejila chemicals mee maka ọgwụgwọ nke cucumbers. Ndị kachasị bụ Kuproksat, Abiga-Pik na Fitolavin-300. Ọzọkwa, ezigbo utịp na-enye ọgwụgwọ nke bushes Bordeaux mmiri mmiri ma ọ bụ ọla kọpa oxychloride.
Mgbochi ọrịa dabere na ojiji nke ezigbo mkpụrụ (pickled na ngwọta nke 0.02% zinc sulphate) ma ọ bụ kukumba seedlings.
Ebe ọ bụ na ọrịa ahụ na-amalitekarị na mbụ, echefula ịkwalite nsogbu nke osisi ahụ, na-enye ya nri fatịlaịza.Nọgide na-enwe ala mmiri na-adịghị mma ma zere mmiri dị ọcha n'ógbè ahụ.
Ọrịa nke ero na-ezughị okè Rhizoctonia solani Kuhn. Ọ na-emetụta ọ bụghị nanị cucumbers, kamakwa poteto, carrots, kabeeji.
Isi ihe kpatara ya ero na cucumbers - ndo nke mmiri na mmiri na ịṅụ oké mmiri. N'okwu a, pathogen na-eche na ọ dị mma na iru mmiri na okpomọkụ site na 3 ruo 25˚С.
Ọ bụrụ na ọkpụkpụ razoktoniozom na-arịa ọrịa - ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke osisi ga-anwụ (na-eme dị ka mgbọrọgwụ ire ere), nke na-agbaji ọkara naanị ya.
N'ime osisi toro eto, akụkụ ọ bụla nke ohia a na-emetụta ma ọ bụghị inflorescences. Akwụkwọ ahụ kpọrọ nkụ, a na-ekpuchi mkpụrụ osisi ahụ na "nsí" ma ọ bụghị echekwa ya. Ndị okenye agaghị anwụ site na ero a, ma a ga-enwe nnukwu ihe nha na mkpụrụ.
Ịnagide rhizoctoniosis a ga-amata ya na odo odo na agba na agba odo na cotyledon epupụta. Otu osisi toro eto na-ebute ọrịa ahụ n'ụzọ dị iche: epupụta kpuchiri ya na nnukwu ebe gbara ọchịchịrị nke ọdịdị oge ụfọdụ, ebe oval na-ada mbà n'obi na-ejupụta na mkpụrụ osisi, petioles kpuchie ọnya oblong.
Kpuo ero site na cucumbers nwere ike ịbụ kemịkal ma ọ bụ ihe ndu. Ọ bụrụ na ajọ ọrịa na-emetụta akụkụ buru ibu, mgbe ahụ, a ghaghị iji fungicides, gụnyere: Kvadris, Strobe, Metamil MC na Ridomil Gold MC. Ndị a bụ ihe ndị kasị egbu egbu nke ndị ọrụ ugbo na ndị ọrụ ubi na-eji.
Nhọrọ nhọrọ nyocha dabere na nje bacteria na akọrọ ndị na-eri nri nke rhizoctoniosis: Trichodermin, Planriz na Baktofit. Enwere ọgwụ ọjọọ na obere ebe, a chọrọ ọgwụgwọ mgbe obere oge gasịrị. Ọgwụ ndị dị otú ahụ adịghị emerụ mmadụ ma ọ bụ osisi, ya mere, ọ bụ ihe ọzọ dị mma.
Iji gbochie ọdịdị ahụ ọrịa obi, ị ga-agbaso iwu ndị a:
nyochaa ihe ubi;
nyochaa ihu igwe na ala (karịsịa n'ime ụlọ griin);
mulch na ihe nkiri ma ọ bụ ihe ndị ọzọ;
bibie ata ah u wee kpoo ebe ah u site n 'ebe nd i rere ure;
kpochapu ala n'oge kwesiri.
A na-akpata ọrịa ahụ site na kukumba virus Cucumber mosaic virus. Na osisi a gosipụtara mosaic ahụ dị ka akwụkwọ wrinkled, ọdịdị nke gbara ọchịchịrị ma ọ bụ na-acha ọcha. Akwụkwọ ndị ahụ na-acha odo odo, a na-ekekwa ha n'ọnụ ya. Na mgbakwunye na epupụta ahụ, a na-emetụta mkpụrụ nke kukumba (kpuchie ya na ntụ ọcha) na mkpịsị ụkwụ (mgbawa na mgbawa).
Nje virus dị ize ndụ na nke a, ruo mgbe a ga-achọpụta ya, enwere ike imetụta ọtụtụ ebe ị ga-enweta. Osisi na-arịa ọrịa na-efunahụ uto, na arụpụtaghị ihe arụ.
A na-ebu nje ahụ tinyere ala na akụkụ nje ma ọ bụ akụkụ rere ure nke osisi ahụ. Otu kukumba nwere ike ịda ọrịa ma n'oge akuku, na n'ogo dum na mkpụrụ osisi ovary.
Ohere nke ibute ọrịa na-eme ka ọnya ahụ daa ma mebie akụkụ cucumber. Ọ dị mkpa ịghọta na nje ahụ nwere ike ịbanye na greenhouses site na ala rụrụ arụ. Ọzọkwa, nje nje nwere ike ibute nnukwu osisi bushes.
Ọ dị mkpa! Ihe ọṅụṅụ, mgbọrọgwụ, epupụta, mkpụrụ osisi na Ome nke osisi ahụ a na-emetụta bụ ndị na-ebu nje ahụ, ya mere a na-akpọ ha ọkụ n'èzí saịtị ahụ, na ihe niile eji eme ihe na omenala ahụ bụ disinfected.
Moses na-emetụta osisi n'agbanyeghị ọnọdụOtú ọ dị, ịdị elu dị elu na ikuku nke ikuku site na +25 ˚С na nke elu mepụtara ọnọdụ kacha mma maka nje ahụ.
A naghị emeso nje Mosaya mere, a ghaghị iwepụ osisi ndị ahụ emetụta ozugbo. Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ kukumba dị iche iche na-eguzogide ọgwụ ahụ (Zozulya, Lord, Arina, Verenta) na-eri.
Kwesịrị ịmepụta ihe nchebe megide nje virus, ya bu:
nhicha nke ata site na saịtị;
disinfection nke ngwá;
preplant mkpụrụ ọgwụgwọ na potassium permanganate;
mbibi nke ndị na-ebute ọrịa ahụ.
N'ịmara na nje ahụ nwere ike ịnọgide na ala, a na-egwupụta mkpụrụ osisi dị nso n'osisi ahụ emetụtara ma ọ bụ na-edozi ya. Karịsịa mkpa disinfection maka greenhouses na greenhouses.
Cladosporium cucumerinum Ellis Arthur na-eme ka mmanụ olumba na-egbu egbu, ya mere a na-akpọkarị ọrịa ahụnkwụ sporosis".
Ọrịa na osisi ahụ na-egosipụta onwe ya n'ụdị ogho olive. Ọtụtụ mgbe ọ tụrụ mkpịsị mkpụrụ. Ka oge na-aga, ụmụ irighiri mmiri na-etolite na ntụpọ, mgbe ahụ, ebe mgbagwoju anya na-esi ike. Mgbe a gwusịrị, a na-ekpuchi ihe ndị ahụ na-acha ọcha.
Ọrịa ahụ dị ize ndụ n'ihi na ọ na-egbochi uto nke osisi ahụ dum, na-emebi mkpụrụ ahụ ma gbochie mmepe ha. Mgbe zuru ezu mebiri emebi, kukumba bushes nwere ike nkụ.
Ngwurugwu na-emetụta kukumba na oke iru mmiri na obere okpomọkụ. Ọnọdụ ndị dị otú a nwere ike ịmalite na griin haus na-egbusi mmiri ọkụ.
Ọrịa nke cucumbers na-eme site na ala. Ọtụtụ mgbe, ero na-ekpuchi akụkụ ahụ rere ure nke osisi na ata. E nwere ike ịmalite ịkụnye ọrịa ahụ n'ubi ahụ na mkpụrụ osisi ndị a na-adịghị emerụ ahụ.
Ụlọ ọgwụgwọ nwere ike ma usoro magburu onwe ya ma ọ bụ fungicides. Iji usoro ndị ọkachamara nke ọgwụgwọ gụnyere ịkwanye bushes na ayodiin chloride ngwọta ma ọ bụ mmiri na mmiri (1 ruo 10).
Ihe dị irè n'ịlụso olive blotch bụ chemicals.
Spraying 1% ngwọta nke Bordeaux mmiri mmiri.
Furigation na sulfur dioxide maka ụbọchị abụọ. A na eji ya na greenhouses.
Ọzọkwa a pụrụ igbochi ọrịa ahụ, ọ bụrụ na ị na-eme fatịlaịza n'oge kwesịrị ekwesị, hichaa ala site na osisi residues na disinfect greenhouses na greenhouses. Ọ dị mkpa ịchọta ihe ọkụkụ ọkụkụ na nyochaa ihu igwe.
Ị ma? Site na echiche nke botany, mkpụrụ nke kukumba bụ ugu, ya bụ, ọ bụ mkpụrụ osisi, ma site na isi nri, kukumba bụ ihe oriri.
Ugbu a, ị nwere ike ịmata ọrịa ahụ ma gwọọ ya. Ịmara ụzọ nke igbochi ọrịa nke cucumbers, ị nwere ike igbochi mmeri nke osisi ahụ ma nakọta ezigbo owuwe ihe ubi.
A na-atụ aro ọtụtụ Yellow Hoppies dị iche iche nke China maka ịkọ ihe na ihu igwe.
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Otú e si emeso ọrịa cucumbers